Ukudla Mediterranean, imenyu ngeviki isisindo ukulahleka
Ukudla Mediterranean isisindo ukulahleka - akusiyo nje ushintsho esifushane yokudla yokuphila. Nayo ungakwazi hhayi kuphela ulahlekelwe isisindo esengeziwe esikhathini esifushane, kodwa Uphilisa umzimba wakho ngaphakathi nangaphandle, ukuze ulungise umzimba bese ukuma esiphelele ngenxa yalokho.
Lokhu Ukudla kusekelwe nokudla okunomsoco, okungukuthi, umzimba uzothola zonke idinga i nezakhi ezibalulekile, amavithamini namaminerali. Ngilusizo Mediterranean Ukudla imenyu ngesonto okubandakanya isilinganiso esifanele fat, amaprotheni kanye carbohydrate kuzosiza ukuba unciphise umzimba ngaphandle umonakalo empilweni. Noma kunjalo, akufanele sikhohlwe ukuthi kubalulekile ukuvivinya umzimba, kuphela inhlanganisela afanele yokudla nokuvivinya umzimba iyoletha imiphumela ingabonakali.
izimiso Ukudla Mediterranean
ibhulakufesi wakho kufanele uqinisekise ukuthi ufaka okusanhlamvu, ukudla kwasemini kanye dinner yanconywa imifino ngefomu kusetshenzwe noma engaphekiwe. Inhlanzi kumele ibe kuthebula yakho okungenani izikhathi ezine ngesonto. Izinongo, amakhambi, garlic kanye no-anyanisi - konke lokhu Mediterranean Ukudla imenyu ngesonto kufanele uqinisekise ukuthi ufaka zonke lezi imikhiqizo.
It bavunyelwe futhi inyama, kodwa mafutha kangcono. inyama Red kungadla akukho kuka izikhathi eyodwa kuya kulokutsatfu ngeliviki. Ukudla esekelwe Ukudla Mediterranean kufanele njalo zihlanganisa servings imikhiqizo yobisi. Zingase zibekwe yogurt okuzenzela noma yogurt. Amaqanda futhi izithelo - ezingeqi kwezingu izingcezu ezimbili noma kathathu ngosuku. Ungakwazi uphuze ngisho iwayini elincane ngesikhathi kwasemini noma dinner.
Ukudla Mediterranean - imenyu sonto
Inzuzo enkulu yale Ukudla ukuthi kuvunyelwe ukudla okunhlobonhlobo. Lokho, ukudla okudlayo ngeke nje olinganiselayo, kodwa futhi isabalalise. Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu Ukudla iyoba indlela yakho yokuphila, futhi ungakwazi kalula abanamathela umsoco ofanele. Ngakho, ekudleni okuyisibonelo izinsuku eziyisikhombisa.
Usuku 1: Ukuze ibhulakufesi - ubhontshisi we isinkwa wholemeal, unga ibhotela noma ujamu, itiye noma ikhofi. Ngesikhathi sokudla kwasemini - pasta ne imifino, itiye herbal. Ngezinye kwakusihlwa - spaghetti ushizi itiye. Ngezinye isidlo nawe ungadla yogurt, amaqanda abilisiwe, noma izithelo.
Usuku 2: Ekuseni - ingxenye Muesli ne-yogurt noma ubisi olunamafutha amancane noma, ukuze kulungiselelwe ukudla kwasemini - ubhontshisi imifino, itiye eliluhlaza, idina - izinhlanzi kubhakwe kuhlanganiswe nanoma lemon kanye namakhambi, inkomishi irayisi kanye itiye. Umthamo - yogurt, izithelo, ubhontshisi.
Usuku 3: ubhontshisi lwesinkwa wholemeal nge jamu ibhotela itiye ngesidlo sasekuseni. Pasta nge inyama, isaladi, imifino, itiye, ilantshi, idina - irayisi nemifino itiye. Umthamo - yogurt, izithelo, itiye eliluhlaza.
Usuku 4: Ekuseni - ephansi fat cottage shizi, ubhontshisi, itiye. Ngesikhathi sokudla kwasemini - amadombolo nge imifino, itiye; kwakusihlwa - isaladi ne imifino, inhlanzi kanye itiye. Umthamo - yogurt, ingilazi yobisi.
Usuku 5: Toast ushizi ujamu kanye itiye for kwasekuseni, kwasemini - ipea isobho, juice ezingenashukela, idina - yenkomo goulash, imifino, itiye, noma isiphuzo sezithelo. Umthamo - yogurt, izithelo.
Usuku 6: Ekuseni - ubhontshisi isinkwa, ushizi netiye. Isidlo sasemini - Spaghetti nge sauce, ham iminqumo itiye. Dinner - spaghetti nemifino itiye. Umthamo - yogurt, granola ne-yogurt.
Seventh-day imenyu lokhu ekudleni ukudla iphindwa ngokuphelele ngosuku lokuqala.
Njengoba ubona, ekudleni Mediterranean, imenyu ngoba ngesonto kuyinto okunhlobonhlobo okunempilo, ofanele ukuba noma ubani ofuna ukunciphisa umzimba, kodwa ungazilambisi. Kulesi Ukudla nhlobo Izimo. Kuyinto elula kakhulu futhi kulula ukulandela, ngisho noma kufanele adle ngaphandle ekhaya. Nokho, ungalindeli Imiphumela esheshayo. Izinsuku eziyisikhombisa ungalahlekelwa ikhilogremu elilodwa nje. Kodwa njengoba okusheshayo kwesisindo Akukuhle ukuba impilo yakho, kungashiwo ukuthi ukudla okunjalo Mediterranean: Lose Weight ngeviki, ngokushesha futhi ngendlela efanele.
Bialowieza Ihlathi - engcebweni isizwe!
Umuthi 'Oktenisept'. imfundo